Amaala Antigua na Barbuda - ezinụlọ Investzụ Ego
Citizenship by Investment Unit (CIU) na-atụ aro na Cabinet maka nnabata nke azụmaahịa, ma ọ dị ma ọ bụ na-atụ aro, maka ebumnuche itinye ego na azụmaahịa n'okpuru Citizenship site na Mmemme Mmemme.
Uzo ahia ahia abuo a bu:
Onye ji aka ya tinye akwụkwọ, na aka ya, na-etinye ego na azụmaahịa akwadoro ọ dịkarịa ala US $ 1,500,000
Opekata mpe mmadụ abụọ imekọ ihe ọnụ na azụmaahịa akwadoro mkpokọta US $ 2. Achọrọ onye ọ bụla itinye ego opekata mpe US $ 5,000,000. Enwere ike itinye akwụkwọ maka nwa amaala site na itinye ego na ya, ya ma ọ bụ nnọchite ha site na onye nnọchite anya.
Ozugbo enyerela nkwado azụmaahịa azụmaahịa, CIU ga-atụle ngwa maka ịbụ nwaamaala. Usoro ntinye akwụkwọ ahụ yiri nke NDF, ya bụ, mgbe ị nyefere akwụkwọ anamachọihe gị, a ga-agwa gị ka ị kwụọ ụgwọ maka ịdị uchu na ụgwọ 10% nke ụgwọ gọọmentị. Mgbe ị nwetara akwụkwọ ozi ihu ọma, a ga-agwa gị ka ị kwụọ ụgwọ nke ụgwọ nhazi gọọmentị na ego itinye ego azụmaahịa gị n'ime ụbọchị 30. N'ihi ụdị ọdịdị dị iche iche nke itinye ego dị otú ahụ, a ga-enwe nkwekọrịta nkwekọrịta ọ bụla n'etiti ndị ọzọ mana a ga-emefefe ego itinye ego n'ime ụbọchị 30 site na ịnye akwụkwọ nkwado.
Ozugbo enwetara, a ga-enye asambodo idebanye aha maka ndị isi akwụkwọ na ndị ezinaụlọ ha nke a ga-enyefe akwụkwọ ọrụ paspọtụ yana akwụkwọ na akwụkwọ ọ bụla na-eso ya.
Onye nnọchi anya gị / onye nnọchi anya gị ga-enye gị ndụmọdụ gbasara ụbọchị iji dị ma:
Gaa Antigua na Barbuda ịnakọta paspọtụ gị ma theụọ iyi ma ọ bụ nkwuputa nkwenye gị.